Wararka :Wacaal Media
You are here: Home » Wararka	You are browsing entries filed in "Wararka"
Waxaa goor dhow lagu wadaa in xarunta Golaha Shacabka ee Magaalada Muqdisho, ay ka bilaabato Doorashada Guddoomiye Ku xigeenada Golaha Shacabka. Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya ayaa intooda badan ku sii xaadiray xarunta Golaha Shacabka ee Magaalada Muqdisho, halkaasi oo ah goobta Doorashada ay ka dhaceyso. Musharaxiinta u taagan qabashada xilka Guddoomiye […]
January 12, 2017 | Posted in Wararka| Read More »
Degaanka Gadoon oo dhowr iyo 30-KM ujira Magaalada Dhuusa-mareeb ee xarunta Gobolka Galgaduud ayaa waxaa maalmihii la soo dhaafay ka taagnaa xiisado u dhaxeeya Maleeshiyo beeleed wada dega Degaankaasi. Waxgarad is xil qaamay ayaa ku baxay qaboojinta xiisadahaasi, waxana xiisadan la sheegay in ay soo taagneyd 11-kii sano ee la […]
Magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta Golaha shacabka ayaa maanta lagu wadaa in ay ka dhacdo Doorashada Guddooomiye ku xigeenka 1-aad iyo 2-aad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, maadaama horey ay u shaaciyeen Guddiga Qaban Qaabada Doorashada Guddoonka Baarlamaanka. Ammaanka Magaalada Muqdisho ayaa maanta si weyn loo adkeeyay, gaar ahaan xarunta ay […]
Madaxweynaha Maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed oo shalay dib ugu laabtay Magaalada Cadaado oo xarun KMG u ah Maamulka Galmudug ayaa waxa uu ka hadlay Abaaraha ka jira Degaanadaasi. Waxa uu sheegay guud ahaan Dalka, gaar ahaan Degaanada Galmudug in ay ka jiraan Abaaro aad u daran oo dadka, duunyada iyo […]
Wararka inaga soo gaaraya Magaalada Beledweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi xalay uu ka dhacay Qarax khasaare geystay. Qaraxan oo nuuciisa uu ahaa Bambo gacmeedka gacanta laga tuuro ayaa lagu weeraray goob maqaaxi ah oo ku taalla xaafada Xaawo-taako ee Magaalada Muqdisho Beledweyne. Inta la […]
Wasaaradda arrimaha dibedda Mareykanka ayaa muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan dalka Soomaaliya sababo la xiriria dhaqdhaqaaqyada weli socda ee kooxda Al-Qacida xiriirka la leh ee Al-Shabaab. Wasaaradda waxa ay sheegtay in muwaadiniinta Mareykanka ay ka warhayaan halista afduub ee ka jirta guud ahaan Soomaaliya, oo ay ku jiraan Puntland […]
Magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta Golaha shacabka ayaa maanta lagu wadaa in ay ka dhacdo Doorashada Guddooomiye ku xigeenka 1-aad iyo 2-aad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, maadaama horey ay u shaaciyeen Guddiga Qaban Qaabada Doorashada Guddoonka Baarlamaanka. Ammaanka Magaalada Muqdisho ayaa maanta si weyn loo adkeeyay, gaar ahaan xarunta Golaha […]
Madaxweynaha Maamulka Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa Ciidamada Puntland ku amaanay sida geesinimada leh oo ay kaga guuleysteen sida uu sheegay Kooxda Daacish ee Degmada Qandala ku sugnaa. Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in Ciidanka Puntland ay ku guulesyteen in Kooxdii Daacish ka tirsaneyd in ay ka saaraan degaanada […]
January 11, 2017 | Posted in Wararka| Read More »
Guddoomiye cusub oo loo magacaabay Galgaduud
C/kariin Xuseen Guuleed Madaxweynaha Galmudug ayaa Maxamed Cali Cilmi u magacaabay Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Galgaduud. Xuseen Cali Wehliye ayaa horey u ahaa Guddoomiyahii Gobolka Galgaduud.
Faroole oo baaq diray
C/raxmaan Sheekh Maxamed Faroole oo ka mid ah xubnaha xildhibaanada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay Abaaraha dalka ka jira iyo heerka ay gaarsiisan yihiin. Waxa uu sheegay Abaaraha dalka ka jira in ay yihiin kuwo sii xoogeystay, oo si weyn u saameeyay dadka iyo duunyada […]
Kenya oo xirtay 2 Dhalinyaro ah
Booliska Dalka Kenya ayaa xiray Labo dhalinyaro ah oo aan la shaacin wadamada ay ka soo jeedaan, kuwaas oo looga shakiyay in ay xiriir la leeyihiin ururka Al-Shabaab. War ka soo baxay xafiiska Isbatooraha Guud ee Booliska Kenya ayaa lagu sheegay raggan in lagu qabtay Decomentiyo cadeynaya weeraro ay geysan rabeen iyo agabyo […]
Afduubka Maraakiibta Caalamiga oo warbxin laga soo saaray Sanadkii 2016-kii
Warbxin ay soo saartay hay’adda Caalamiga ah ee kormeerka iyo ilaalinta Badaha Sanadkii 2016 kii ayaa sheegtay in afduubkii Markiibta uu Sanadkaasi ahaa mid uu hos u dhacay gaarayna 191 dhacdo, halka sadandkii ka horeeyay 2015 kii uu ahaa 246 fal afduub Marakiib ah. Hoos u dhaca ka yimid afduubka […]
Jawaari Oo Loo Doortay Guddoomiyaha Golaha Shacabka
Waxaa xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ka dhacday doorashada guddoomiyaha golaha shacabka, waxaana guuleystay Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. Waxaa codeysay 259, waxaana xumaaday Labo cod, iyadoo lagu kala baxay wareeggii Kowaad ee doorashada. Hadaba waxaan halkaan idiin kugu soo gudbineynaa sida codadka loo kala helay: Xildhibaan Cabdifitaax Maxamed Ibrahim […]
Doorashada Guddoomiyaha Golaha Shacabka Oo Ka Bilaabatay Muqdisho
Waxaa hadda ka bilowday xarunta Golaha Shacabka doorashadii Guddoomiyaha golaha shacabka oo maanta la filayo in lagu doorto magaalada Muqdisho. Xildhibaannada ka soo qeybgalay doorashada ayaa hadda waxay kor u sii dhaafayaan 150 iyadoo la filayo iney ku soo biiraan kuwo kale oo hadda xaadir ahayn. Doorashada guddoomiyeyaasha labada aqal […]
Ammaanka Muqdisho oo aad loo adkeeyay
Magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta Golaha shacabka ayaa maanta lagu wadaa in ay ka dhacdo Doorashada Guddooomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, maadaama horey ay u shaaciyeen Guddiga Qaban Qaabada Doorashada Guddoonka Baarlamaanka. Ammaanka Magaalada Muqdisho ayaa maanta si weyn loo adkeeyay, gaar ahaan xarunta Golaha shacabka oo ay ka dhaceyso Doorashada […]
Madaxweynaha oo ka hadlay khilaafka Galmudug
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka digay xasillooni darro siyaasadeed oo xiligaan ka dhacada degaanada Dowladda Gobolleedka Galmudug oo horumar ku tallaabsaday mudada uu jiro. Madaxwweynaha ayaa sheegay inaan xiligaan la aqbali karin khalalaase siyaasadeed ee u dhaxayeeya Xildhibanaada iyo Madaxda dowlad Gobolleedka Galmudug , iyada […]
Doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka oo maanta dhaceysa
Magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta Golaha shacabka ayaa maanta lagu wadaa in ay ka dhacdo Doorashada Guddooomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, maadaama horey ay u shaaciyeen Guddiga Qaban Qaabada Doorashada Guddoonka Baarlamaanka. Ammaanka Magaalada Muqdisho ayaa maanta si weyn loo adkeeyay, gaar ahaan xarunta ay ka dhaceyso Doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka 10-aad […]
Shabaab oo toogtay 3 nin
Shabaab ayaa gelinkii dambe ee shalay waxa ay Saddex ruux ku toogteen magaalada Bu’aale ee xarunta gobolka Jubbada dhexe. Fagaare ku yaala magaalada Bu’aale ee xarunta gobolka Jubbada dhexe waxaa shalay gelinkii dambe lagu toogtay saddex ruux oo laba ka mid ah ay ku kaceen fal isku galmoosho ah halka midka kalena […]
Muqdisho Oo Lagu Dagaallamey
Wararka inaga soo gaaraya Degamada Xamar Weyne ee Gobolka Banaadir ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka dhacday is rasaaseyn khasaare geysatay. Is rasaaseyntan oo u dhaxeysay Ciidamo ka wada tirsan Dowladda Federaalka ayaa waxa ay si gaar ah uga dhacday nawaaxiga bacadlaha ee Degmada Xamar Weyne. Dhacdadan ayaa […]
January 10, 2017 | Posted in Wararka| Read More »
Guuleed Muxuu Ka Yiri Xilkii Laga Qaaday
Madaxweynaha Maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed ayaa ka soo horjeestay Xilka qaadis ay maanta ku dhawaaqeen Xildhibaannada maamulkiisa in ay isaga ku sameeyeen. War-Saxaafadeed ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Maamulka Galmudug ayaa u qoran sidan: Dowlad Goboleedka Galmudug waa Dowlad Goboleed hay’ada heeda dowligaa ay ku dhisan yihiin sharci iyo […]
Somalia Iyo Qatar Oo Arrin Muhiim Ah Ka Shirey
Dowladaha Soomaaliya iyo Qadar ayaa ka wada hadlay xiriirka Labada dal, kadib warqad qoraal ah oo Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu u diray Dowladda Qadar, gaar ahaan Amiirka dalka Qadar, Sheekh Tamim bin Hamad Al-Thani. Warqada Qoraal ah oo uu Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu u diray Amiirka dalka Qadar ayaa waxaa […]
Xiisad Laga Soo Sheegayo Cadaado
Wararka inaga soo gaaraya Magaalada Cadaado ee xarunta KMG ah ee maamulka Galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in maanta halkaasi ay ka taagan tahay xiisad ka dhalatay Mooshinka xilka looga qaaday Madaxweynaha Maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed. Xiisadan ayaa timid kadib markii xildhibaanada Galmudug kulan ay ku yeesheen Magaalada Cadaado […]
DEG DEG: Xildhibaannada Galmudug Oo Kalsoonida Kala Laabtey Guuleed
Xildhibaanada Galmudug ayaa kulan ay ku yeesheen Cadaado waxay u codeeyeen in ay kalsoonida kala laabteen Madaxweynaha Galmudug. 54-Xildhibaan ayaa Ogolaatay, cid kama aamusin, cidna ma diidin. Waxaa xusid mudan in madaxda Galmudug ay kulankaan baarlamaanka u arkaan mid sharci daro ah oo baarlamaanku uu ku jiro fasax. Gudoomiyaha Baarlamaanka […]
SAWIRRO: Xildhibaannada Ahlu-sunna Oo La Dhaariyey
Xildhibaanada cusub ee Maamulka Ururka Ahlusunna ayaa lagu dhaariyay Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimada maamulka Galmudug. Shalay ayay aheyd markii ay yeeseen Baarlamaan cusub, kadib kulan ka dhacay Magaalada Dhuusa-mareeb ee Gobolka Galgaduud. Magacaabista xildhibaanadan ayaa waxa ay ku timid qaab xulitaan ah, kadib waxaa Digreeto ku magacaabay Madaxweynaha Maamulka Ahlusunna […]
Ilka Xanaf Oo u Guryo Noqonaya Hargeysa
Gudoomiyihii hore ee Maxkamada Sare ee Soomaaliya Caydiid Cabdulaahi Ilka Xanaf ayaa sheegay in uu dib ugu laaban doono degaanada maamulka Somaliland oo uu kasoo jeedo hadii loo diido in uu isku sharaxo xubnaha Aqalka Sare ee ka imaanaya degaanada maamulka Somaliland. Ilka Xanaf ayaa sheegay in Madaxda dowladda Soomaaliya […]
Baarlamaanka Ahlu-sunna Oo Farrii Loo Direy
Madaxweynaha Ururka Ahlusunna Sheekh Axmed Shaakir ayaa ka hadlay baarlamankii shalay ururkaasi ay ku magacowdeen Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. Waxaa uu sheegay in baarlamaankan uu yahay mid sharci ah oo loogu talay in uu u adeego bulshada kunool gobolada Dhexe. Baarlamaankaan ayuu sheegay Madaxweynaha Ururka Ahlusunna in laga […]
Madaxweyne Cosoble Oo Baaq Direy
Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa sheegay in abaaro baahasan ay ka jiraan degaanada Hirshabeelle dadkuna haatan ay u baahanyihiin gar gaar deg deg ah. Madaxweyne Cosoble ayaa sheegay in dadka ay haystaan dhibaatooyin kala duwan ,islamarkaana ay qarka u saaran yihiin in ay u dhintaan abaaraha . Sidoo kale […]
Maalinta Berri Ah Oo Ka Duwan Maalmihii Lasoo Maray
Maalinta Berri ah oo ay Taariikhdu ku beegan tahay 11 bishaan ayaa lagu waddaa in Magaalada Muqdisho ay ka bilaabato doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo sidoo kale ku xigeenadiisa. Ugu horeyn Waxaa lagu waddaa in ay dhacdo doorashada gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya , waxaana sidoo kale 12 bishaan dhici doonta doorashada gudoomiye […]
Maamul Cusub Oo Loo Magacaabay B/weyne
Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle Mudane Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa magacaabay Guddoomiyaha degmada Baladweyne, Guddoomiye kuxigeenka degmadaasi iyo Guddoomiye ku xigeenka degmada Matabaan, sida ay u xaqiijiyeen masuuliyiin ka tirsan Hirshabeelle Wakaalada Wararka Soomaaliyeed ee SONNA. Guddoomiyaha Degmada Baladweyne ayaa waxaa loo magacaabay Maxamed Axmed Ibraahim halka Guddoomiye ku xigeenka degmadaasi loo […]
Jawaari oo lacag ugu Yaboohay Guddiga Abaaraha
Guddoomiyihii hore ee Barlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa ugu yaboohay guddiga loo xil saaray abaaraha ka jira dalka 10,000 kun oo dollar oo lagu tala galay in lagu gargaaro dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku sugan gobolada dalka Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo hadda ka mid […]
January 7, 2017 | Posted in Wararka| Read More »
Taliye cusub oo loo magacaabay ciidanka Booliska gobolka Mudug
Taliyaha qeybta Booliska gobolka Mudug Kornel Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame ayaa xilkii laga qaaday , waxaana taliye cusub loo magacaabay ciidanka Booliska gobolka Mudug ee Puntland. Taliyaha guud ee ciidanka Booliska Puntland ayaa ku dhawaaqay in xilkii laga qaaday Kornel Cabdiwaaxid , islamarkaana loo magacaabay xil kale. Taliyaha qeybta Booliska Puntland […]
Ciidanka Milatariga oo isbaarooyin dhigtay Shabeelaha Hoose
Sida uu xaqiijiyay Gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Ibraahim Cali Aadan Najax ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Milatariga ayaa isbaarooyin dhigtay wadooyin ku yaalla gobolka Shabeelaha Hoose. Waxaa uu sheegay in ay tahay wax caadi ah ciidanka xoogga ay qaadan lacago. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in Gaadiidleyda ka shaqeysa gobolka […]
AMISOM oo dishay 70 neef oo geel ah
Sida ay Wacaal Media u sheegeen dadka degaanka Ciidanka AMISOM ayaa dilay ku dhawaad 70 neef oo geel ah shalay gelinkii dambe. Falkaan ayaa ka dhacay degaanka lagu magacaabo Wareer-male, oo hoos-tagga Degmada Baraawe. Kolonyo ay la socdeen Ciidanka AMISOM oo ka amba baxay Magaalada Muqdisho, kuna sii jeeday Degmada […]
Heshiis ka dhacay Caabudwaaq oo lasoo dhaweeyay
Odayaasha Dhaqanka ee Magaalada Caabudwaaq ee Gobolka Galgaduud ayaa soo dhaweeyay Heshiis ay wada gaareen labo beelood dhawaan ku dagaalamay Magaaladaasi. Odayaasha dhaqanka ayaa sheegay in ay taageerayaan Heshiiska ay wada gaareen Beelihii walaalaha ahaa ee ku dagaalamay Magaalada Caabud waaq, waxa ayna tilmaameyn in ay ka shaqeynayaan dhaqan gelinta […]
Maamulka Hirshabeelle oo baaq u diray shacabka
Madaxweyne Ku Xigeenka Maamulka Hirshabeelle Cali C/llaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa ka hadlay abaaraha ka jira degaanada Maamulka HirShabeelle. Cali Guud Laawe ayaa sheegay in abaaro daran ay ka jiraan degaanada Maamulkooda loona baahan yahay sida uu sheegay in loo gurmado dadkaasi dhibaateysan. Waxa uu ugu baaqay Shacabka Hirshabeelle iney […]
Ciidanka AMISOM oo dilay labo wiil oo walaalo ah
Ciidamada AMISOM ayaa shalay duleedka Magaalada Baraawe ee gobolka Shabeelaha Hoose waxa ay ku dileen labo wiil oo walaalo ah sida ay sheegeen dadka degaanka. Kolonyo ay la socdeen Ciidanka AMISOM oo ka amba baxay Magaalada Muqdisho, kuna sii jeeday Degmada Baraawe, ayaa la sheegay in ay geysteen dhacdadaan Xanuunka […]
492 qof oo Soomaali ah oo ka cararay dalka Switzerland
Sida ay shaacisay Waaxda Socdaalka iyo sidoo kale Jinsiyadaha ee dalka Switzerland waxa la la’yahay ku dhawaad 492 qof oo ka mid ahaa Qaxootiga Soomaaliyeed ee kunool dalkaasi. Tiro koob ay sameysay Waaxda Socdaalka ayaa lagu sheegay in dadkaasi Soomaaliyeed ay ka carareen dalka Switzerland , islamarkaana la aaminsan yahay in […]
Shacabka kunool degmada Mandera ee gobolka NFD ayaa ka codsaday dowladda Kenya in laga qafiifiyo Bandowga dowladda Kenya ay kusoo rogtay degmadaasi. Sidoo kale maamulka degmada Mandera ayaa dowladda Kenya u sheegay in ay hoos u dhaceen weeraradii Al-Shabaab ay ka geysan jireen gobolka Waqooyi bari ee dalka Kenya. Gudoomiyaha […]
Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle Cali C/laahi Cosoble iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxa ay gaareen Magaalada Beledweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan. Wafdiga Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle Cali C/laahi Cosoble ayaa waxaa Garoonka Magaalada Beledweyne kusoo dhaweeyay Maamulka Gobolka, Odayaasha Dhaqanka, Haween iyo xubno kale. Ujeedka wafdiga Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle ayaa lagu sheegay sidii […]
January 4, 2017 | Posted in Wararka| Read More »
Jawaari oo isku soo sharaxay Guddoomiyaha Baarlamaanka
Xildhibaan Maxamed Sheekh Cusmaan Jaawari oo ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa Maanta shaaciyay in uu u tartamayo Xilka Guddoomiyaha Golaha Shacabka. Jawaari oo Maanta Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Shacabka Soomaaliyeed iyo Xildhibaanada qaar ay ka codsadeen inuu isku soo sharaxo Xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka isla markaana […]
Ciidamo ka tirsan AMISOM oo aan Sanad mushaar qaadan
Ciidamada Booliska Nigeria ee ku jira Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa sheegay in aysan mushaar qaadan mudo ku dhow hal sano. Saraakiil ka tirsan ciidankaasi oo la hadlay Warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in ay dhameysteen shaqadoodii loogu tala galay in ay ka qabtaan Soomaaliya , islamarkaana hadda ay ku […]
Faahfaahin khasaaraha ka dhashay Qarax ka dhacay Xarunta Hay’adda UNDP ee Muqdisho
Wararka naga soo Gaaraya Xarunta Hay’adda UNDP ee Qaramada Midoobey ay ku leedahay Magaalada Muqdisho Caasimada Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu ku Qarxay Gaari ay leedahay Hay’adaasi. Gaari ayaa la sheegay in uu kasoo baxay Garaash ku dhaw xarunta Hay’adda ,islamarkaana uu Qarxay Marka uu gudaha usoo […]
Koonfur Galbeed oo ku baaqday in Shariif Xasan doorashada laga joojiyo
Wasiirka Diinta iyo awqaafta Maamulka Koonfur galbeed Axmed Maxamed Barre (Macalin Barre) oo la hadlay Warbaahinta ayaa ugu baaqay Beesha Caalamka iyo dowladda Soomaaliya in laga joojiyo Musharaxnimada Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan. Wasiirka ayaa sheegay in Shariif uu ku fashilmay hogaaminta Maamulka Koonfur Galbeed ,islamarkaana aysan […]
Xaaladda deg degga ah ee Turkiga oo la kordhiyay
Baarlamaanka dalka Turkiga wuxuu u codeeyay in la kordhiyo xaaladda degdegga ah ee dalkaasi uu ku jiro. Wuxuu baarlamaanka ogolaaday in seddax bilood laga badiyo amarka degdegga ah oo la soo rogay ka dib afgembigii fashilmay ee bishii July, 2016. Hadda wuxuu sii socondoonaa illaa bartamaha bisha April ee sanadkan. […]
Kooxo hubeysan oo weerar ku qaaday magaalada Jowhar
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Jowhar ee Xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in kooxo hubeysan ay xalay weerar ku qaadeen Koontoroolka Waqooyiga ee laga soo galo Magaalada Jowhar oo ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda Soomaaliya. Dagaal xoogan ayaa kooxaha hubeysan iyo sidoo kale ciidanka dowladda ku dhexmaray […]
Madaxweyne Gaas oo Baaq u diray Shacabka Puntland
Madaxweynaha Maamulka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in shacabka kunool degaanada Maamulka Puntland looga baahan yahay in ay isku gargaaraan madaam Abaaro ba’an ay ka jiraan degaanada Maamulka Puntland. Waxaa uu sheegay in dadka kunool Magaalooyinka Waa weyn ee Puntland laga rabo in ay […]
Kulamo Xasaasi ah oo ka dhacay Kismaayo
aar ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda degaanada Jubbaland oo shalay gaaray Magaalada Kismaayo ayaa sheegay in Kulamo Wadatashi ah ay la qaadanayaan Masuuliyiinta Maamulka Jubbaland. Kulamadaasi ayaa waxaa loogu hadlayaa sidii Xildhibaanada lagu doortay Kismaayo ay ugu war qabi lahaayeen Shacabkooda. Waxaa sidoo kale la […]
Muqdisho: Ammaanka Oo La Adkeeyey
Ammaanka magaalada Muqdisho ayaa Saaka si weyn loo xoojiyey, iyadoo ciidamo ku hubeysan gaadiidka dagaalka la dhigay wadooyinka qaar iyo isgoysyada. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa Saaka xiray Qaar ka mid ah Isgoysyada Muqdisho sida Isgoyska Taleex. Sidoo kale ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa baaritaano ku sameynaya Gawaarida dadweynaha . Magaalada Muqdisho […]
Al-Shabaab oo sheegtay Mas’uuliyadda labo Qarax oo ka dhacay Muqdisho
Al-Shabaab ayaa sheegtay Mas’uuliyada Qaraxyo loo adeegsaday labo Gaari oo ka dhacay Irida laga galo xarunta Ciidanka AMISOM ee Xalane. War lagu daabacay Warbaahinta ku hadasha Afka Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in Qaraxyadaasi loo waday Hotelka Peace oo ku dhow xarunta Ciidanka AMISOM ee xalane. Qaraxyo oo ahaa kuwo xoogan […]
January 2, 2017 | Posted in Wararka| Read More »
Faahfaahino horudhac ah Qarax ka dhacay Agagaarka xarunta Xalane
Sida ay sheegayaan Warar horu dhaca oo ay heshay Idaacadda Risaala Qarax xoogan ayaa waxaa uu ka dhacay meel ku dhow xarunta Ciidanka AMISOM ee Xalane . Qaraxa ayaa ka dhacay Irida laga galo xarunta Xalane ee loo yaqaano Madino Gate. Qaraxa ayaa ahaa mid loo adeegsaday Gaari laga soo […]
Qarax xoogan ayaa Goordhow ka dhacay Agagaarka Xarunta ciidanka AMISOM ee Xalane. Qaraxaan oo ahaa Mid aad u xoogan ayaa si weyna looga maqlay guud ahaan magaalada Muqdisho, waxaana qaraxaan kadib aagaasi laga maqlay rasaas aan la ogeyn waxa ay tahay iyo cida rideysa. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in […]
Weerar Khasaare geystay oo ka dhacay duleedka degmada Luuq
Wararka naga soo gaaraya degaanka Yurkud oo hoos yimaada degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ay jidka u galeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo kusoo jeeday degmada Luuq. Askar ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa la xaqiijiyay in ay ku […]
Daawo Sawirada Mo faarax oo ku guuleystay abaalmarin Caalami ah
Boqortooyada Britain ayaa ku maamuustey hab-maamuuska ugu sareeya ee ay boqortooyadu siiso dadka dalkaasi iyo kuwa Caalamka wax kusoo kordhiya, Oradyahanka caanka ah ee asalkiisu yahay Soomaaliga, Mo Farah. Mo Faarax oo ku guuleystay billad sharafeedka ugu sareeya oo ay bixiso Boqortooyada Dalka Britain oo ah darajada “SIR” ayaa lagu […]
Shabaab Oo Nin Ku Toogtey Jilib
Al-Shabaab ayaa shalay Gelinkii dambe Fagaare ku yaalla Degmada Jilib ee Gobolka Jubbada Dhexe waxa ay ku dileen nin ay ku sheegeen in uu la shaqeynaayay Maamulka Jubbaland. ninka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Saalax Bashiir , waxaana shabaab ay sheegeen in uu lataliye sare kaa ahaa Maamulka Jubbaland. […]
10 Kun Shaqaale Soomaali Ah Oo Gaarey Sacuudiga
Sida laga soo xiganaayo Saraakiil ka tirsan Wasaarada Shaqada iyo Shaqaalaha ee dalka Sucuudi Carabiya , waxaa dhawaan lagu wadaa in dalkaasi ay gaaraan In ka badan 10,000 Shaqaale Soomaali ah. Dowladda Sucuudiga ayaa sheegtay in tilaabadaani ay timid ka dib heshiis ay la gaartay dowladda Soomaaliya. Shaqaalahaan ayaa badankood […]
Musharrax Shariif Sheekh Axmed Oo Musuq Ku Eedeeyey Dowladda Xasan Sheekh
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif sheekh Axmed oo kamid ah musharaxiinta u taagan Xilka Madaxtinimada Soomaaliya ayaa sheegay in Qaar ka mid ah xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ay kusoo baxeen Musuqmaasuq. Sheekh Shariif ayaa ku eedeeyay Madaxda Sar sare ee dalka in ay dhac u geysteen Hantidii Qaranka intii ay […]
Booliis La Geynayo Gaalkacyo
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidamo Boolis ah oo isku dhaf ah loo geyn doono Magaalada Gaalkacyo bilaha soo socda. Ciidamadaan ayaa dhismahooda waxaa iska kaashanaya Puntland, Galmudug, dowladda Dhexe iyo Qaramada Midoobey. Madaxweyne Guuleed ayaa sidoo kale […]
Ra’iisul Wasaare Cumar Muxuu Ka Yiri Colaadda Gaalkacyo?
Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in xal laga gaaray colaadii Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta gobolka Mudug. Waxaa uu sheegay in heshiiskii ay shalay magaalada Muqdisho ay ku wada gaareen labada Madaxweyne uu waxbadan kusoo kordhin doono horumarka Magaalada Gaalkacyo. Waxaa uu xusay in […]
Xildhibaannada Cusub Oo Keenay Mooshin!
Qaar ka mid ah xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in ay keenayaan Mooshin ay ku dalbanayaan in xildhibaanadii shanta ahaa ee doorashadooda la qaadacay in la fasaxo. Xildhibaanada ayaa sheegay in ay haboon tahay in shantaasi xildhibaan aan laga reebin baarlamaanka ,islamarkaana aan lagu laaban doorashadooda. […]
Axmed Madoobe Oo Digniin u Direy Xildhibaannada BFS
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo la hadlay Warbaahinta ayaa xildhibaanada cusub ee golaha shacabka ugu baaqay in aysan wax ku dooran lacago ay ka qaataan musharaxiinta u taagan xilka Madaxtinimada Soomaaliya. Waxaa uu sheegay in xildhibaanada cusub laga doonayo in ay noqdaan kuwo doorta shaqsi waxbadan […]
Qeybtii kowaad Dhacdooyinkii ugu Waa-weynaa ee Sanadkii 2016-ka ka dhacay Soomaaliya
Janaayo Ugu yaraan laba Ruux oo mid ka mid ah uu ahaa Qofkii fuliyay qaraxa ayaa ku dhintay, afar qof oo kalena way ku dhaawacmeen, Qarax maalin Sabti ah 2-dii Janaayo ee 2016-ka ka dhacay gudaha Baar lagu magaaabo The Village oo ku yaalla guriga hooyooyinka oo ka soo horjeeda […]
January 1, 2017 | Posted in Wararka| Read More »
Duqa Magaalada Baledweyne ayaa ka hadlay bandow lagu soo rogay Xaafad ka mid ah Xaafadaha Baledweyne. Cismaan Macalin Cabdi Qalaafow Gudoomiyaha Magaalada Baledweyne ayaa sheegay in ciidanka Milatariga Soomaaliya ay Bandow kusoo rogeen Xaafadda Buundo weyn oo ka mid ah Xaafadaha Magaalada Baledweyne. Waxaa uu xusay Gudoomiyaha in aysan Aqbali […]
Xildhibaanada Aqalka Sare oo aan xuquuq laheyn 3 bilood ee soo socota
Wasiirka Wasaarada Maaliyadda dowladda Soomaaliya Maxamed Aadan Ibraahim ayaa sheegay in xildhibaanada golaha Aqalka Sare aysan wax xuquuq ah aysan ku laheyn miisaaniyadda dowladda saddexda bilood ee soo socota. Wasiirka ayaa sheegay in Miinsaaniyadii sanadkii 2016 dii lagu shaqeyn doono saddexda bilood ee socota ee sanadka 2017. Waxaa uu sidoo […]
Doorashada Golaha Shacabka ee Somaliland oo dib uga bilaabaneysa Muqdisho
Doorashada xubnaha Somaliland ee Golaha Shacabka ayaa Maanta dib u bilaabanaysa, waxaana lagu tartami doona kuraastan. Kursiga Koowaad ayaa waxaa ku tartamaya Musharaxiinta kala ah:- Foosiyo Yuusuf Xaaji Aadan Ra’isal Wasaare Ku Xigeenkii hore . Caasha Aadan Yuusuf. Qaasim Ismaaciil Axmed. Ismaaciil Xasan Jaamac. Kursiga labaad ayaa waxaa ku tartamaya […]
Ammaanka gobolka Waqooyi Bari ee Kenya oo Saaka la adkeeyay
Iyadoo Saraakiisha ammaanka dowladda Kenya ay sheegayaan in laga cabsi qabo in dagaalyahanada Al-Shabaab ay weerar ka geystaan dalka Kenya, ayaa dowlada Kenya waxa ay ciidamo dheeraad ah ay geystay xadka ay la wadaagto dalka Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa sheegaysa in Al-Shabaab ay qorshaynayaan in ay dalka Kenya ay ka […]
Weerar ay ku dhinteen 35 qof oo lagu qaaday Turkiga
Saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in sodon iyo shan qof la dilay halka afartan kalena ay dhaawacmeen kadib markii nin hubeysan u weeraray xarun lagu caweeyo oo ku taala magaalada Istanbul Ugu yaraan hal nin oo hubeysan ayaa la xaqiijiyay in ku lug lahaa weerarka loo geystay goobta lagu caweeyo ee […]